पि’डामा परेका सबैको घाउमा मल्हम लगाउँदै आएका चर्चित सञ्चारकर्मी सन्तोष देउजालाई के भयो यस्तो ? (भिडियो’सहित) – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
पि’डामा परेका सबैको घाउमा मल्हम लगाउँदै आएका चर्चित सञ्चारकर्मी सन्तोष देउजालाई के भयो यस्तो ? (भिडियो’सहित)
काठमाडौं ।चर्चित सञ्चारकर्मी स’न्तोष देउजा बिरामी परेपछि आकस्मिक रुपमा भ’र्ना गरेर उपचार थालिएको छ । सन्तोषलाई गम्भिर समस्या देखा प’रेसँगै उनको उपचार सुरु गरिएको उपचारमा संगल्न चि’कित्सकहरुले बताएका छन् । आ’खिर के भएको हो सन्तोषलाई ? पत्निले रुँदै भनिन् छि’टो निको भएर घर फर्किनुहोस् मेरो भगवान्।
यो पनि,,, दाई भन्दै घरमै आउने छोरीको आमालाई श्रीमानले लिएर हिँडेपछि श्रीमती परिन् मु’र्छा,समाज कता जाँदैछ? (भिडियोसहित),,,काठमाडौं ।छिमेकमै बस्ने विवाहित महिला श्रीमानलाई दाई भन्दै आउँथिन् । आफुलाई पनि भाउजु भन्थिन् । छोराछोरी खेलाउन आफ्नै घरमा लैजान्थिन् । दाई बहिनी जस्तो पवित्र नातामा उनले कहिल्यै शंका गरिनन् । छिमेकी महिलाका श्रीमान विदेशमा थिए ।त्यसैले उनले घरमा एक्लै भएकाले आफुसंग कुराकानी गर्न आएको भनेर खुसी नै थिइन् । स’मय वि’त्दै गयो तर आफुलाई भाउजु भन्ने महिला नै अहिले आफ्ना श्रीमानसंग भागेको थाहा पाएपछि उनी छाँगावाट खसे’जस्तो भएकी छन् ।
दाई बहिनीको पवित्र ना’तालाई बदनाम गरेको भन्दै महिलाले न्याय खोज्न मिडिया सामु आफ्ना समस्या राख्न आएकी छन् ।साउदीमा रहेका यि महिलाका श्रीमान पनि अहिले नेपाल आएका छन् । चितवनमा भएको यो घट’नाले फेरी ए’उटा वैदेशिक रो’जगारीले निम्त्याएको विग्रह देखाएको छ । छोरी लिएर घरमा बसेकी श्रीमती छिमेकी विवाहित पुरु’षसंग हिडे’पछि उनी प’नि साउदीवाट छिटै नेपाल फर्केका छन् । श्रीमतीले आफ्नो सन्तान पनि लिएर गएको भन्दै आफ्नो सन्तान फिर्ता गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।
रञ्जु मगरको श्रीमान र होमबहादुर म’गरको श्री’मती संगै हिडेका हुन् । होमबहादुरको छोरी समेत लिएर श्रीमती रञ्जुको श्रीमानसंग गएको बता’इएको छ । मलाई दिदी भ’न्थिन्, हाम्रो घरमा आउँथिन् मलाई पनि मेरो घरमा आउनुस् भन्थिन् म पनि जान्थे । तर दाई भन्ने मेरो श्रीमानसंग नराम्रो सम्बन्ध रहेछ । सबै गाउँलेले थाहा पाएका रहेछन् ।मलाई कसैले पनि भनेनन् । तर हो’मबहादुर’लाई उनको आमाले भनेपछि भने श्रीमतीको बारेमा थाहा पाएका रहेछन् । होमबहादुरलाई तिम्रो श्रीमती अरु’संग लागेको छ भनेर आमाले भनेपछि आफुले थाहा पाएको बताए । त्यसप’छि उनले अन्य आफन्त र साथीभाईलाई पनि सोध्दा कुरा पुष्टि भए’को उनको भनाई छ ।
यो पनि,,,जन्मदिने आमासंग बस्ने भए सचिन परियार ! सचिनको पैसा देखेर आ’इस भन्नेलाई आमाले दीइन क’डा जवा’फ (भिडियोसहित),,,काठमाडौं । केहि स’मय अगाडीबाट निकै नै भाईरल बनेका सचिन परियारका बुवा तेजेन्द्र परियार बिबादमा तानिएका छन् । सचिन परियार कि आ’मा घरमा हुदा हुदै पनि तेजेन्द्र परियारले अर्को श्रीमती ल्याएका रहेछन । सचिन परि’यार भाई’रल हुदै गर्दा सचिन परियार कि आ’मा छोराको न्यास्रो ला’ग्यो,भेट्न पाउनु पर्छ भनेर मिडियामा आएपछी झन् चर्को बिबादमा आएका हुन् । तेजेन्द्र परियारका बुबा बिबादमा आईरहदा तेजेन्द्र परियारको दोश्रो श्रीमती मिडियामा आएकी छन् । एक बच्चा सहित् घरबाट काठमाडौं भेट्न आएको तेजेन्द्र परि’यारकी श्री’मतीले घर भित्रको आन्तरिक कुरा बाहिर ल्याएकी छन् ।
दुई जना श्रीमती हुदाहुदै पनि फेरी तेजेन्द्र परियारले अर्को श्रीमती ल्याउने हल्ला पनि खुले आम बो’लेका बे’ला एक पछी अर्को गोप्या कुरा बाहिरिन थालेको छ । काठमाडौंको होटलमा बसेका परियारकि श्रीमती घरबाट आ’एपछि तेजेन्द्र परियार बेलैमा घर न आएको र राति अबेर ३\_४ बजेसम्म घर नआउनेसम्मका कुरा बाहिर ल्याएकी छन् । श्रीमती माथिको कुराको खण्डन गर्दै प्रश्न त्रेस्यौदा म कामको लागि बाहिर गएको हु भने मलाई घरमा श्रीमतीको किच किच सहन न सकेर बाहिर गएको हु म कलह सहन सक्दिन म अर्को बिहेसमेत गर्न सक्छु जस्ता ठाडो जवाफ मिडियामा दिएका छन् । एक अन्तरबार्तामा भनेका छन् म माथि न चाईदो कुरा गरेका छन् ।
Previous दाई भन्दै घरमै आउने छोरीको आमालाई श्रीमानले लिएर हिँडेपछि श्रीमती परिन् मु’र्छा,समाज कता जाँदैछ? (भिडियोसहित)
Next पहिलो पटक लक्ष्मी खड्का र चर्चित गायक राजु परियार बिच पर्यो यस्तो घम्साघम्सी दोहोरी,के के भयो त?(भिडियोसहित)
“राष्ट्रपति भण्डारी एमाले,को ओली गुटको प्रवक्ता : शेरबहादुर देउवा”
“अनियन्त्रित भएको, चिनियाँ रकेट हिन्द, महासागरमा खस्यो”
“लोकसेवा,लगायत संवैधानिक आयोग’मा नियुक्ति सिफारिस”